Pero : Mijery ny famaranana ny fiadiana tompondaka erantany avy ao Afar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2010 8:16 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, Français, македонски, বাংলা, English
Nifarana ny alahady 11 jolay lasa teo ny famaranana ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra natao tany Afrika Atsimo. Volan'ny baolina kitra iny volana iny. Nijery ny fifaninanana tany Afar ireo mpitia baolina kitra peroviana. Ankehitriny dia miara-mifaly amin'ny Espanola ry zareo amin'ny mahatompondaka erantany vaovao azy.
Teo amin'ny zaridainan'i Lima (Palza de Armas) nisy ity fijerena baolina amin'ny fahitalavitra ity nandritra ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra ity. Sary avy amin'ny Flickr nampiasain'i Aram Kudurshiana nahazoana alalana tamin'ny Creative Commons.
Omar Velarde, ao amin'ny bilaogy Tiempo extra [es] nanoratra fohifohy:
Taorian'ny fitaintainana dia nokobanin'i Andrés Iniesta ny harato, dia nanjary tompon-daka eran-tany voalohany eo amin'ny tantarany i Espaina taorian'ny nandavoany ny Holandey tamin'ny isa 1 – 0. Niova mena be ny toerana fijerena baolina tao “an-drenivohitry ny baolina kitra” tao Johannesbourg rehefa nijery ny “la Furia's” (anaram-bositra nomena ny ekipa Espaniola) tena nafana fo.
Ny bilaogy En la cancha Perú [es], nanadihady ny lalao famaranana miainga avy amin'ny tantara:
Nahay ny Espaniola nandritra ny lalao ary nampiseho indray ny fahadiovany, ny fanaony ary ny endrika tsaran'ny baolina kitra talohan'ny ady sy ny tolona nataony. Ny lalao famaranana, natao tao an-drenivohitry ny baolina kitra ao Johannesbourg ny 11 jolay lasa teo, dia fanintelony nilalaovana tamin'ny fanalavam-potoana taorian'i Italia tamin'ny taona 1934, Angletera tamin'ny 1966 ary Arzantina tamin'ny taona 1978. Nahazo fandresena ny Mena Masiaka ary nanoratra ny anarany tamin'ny fahazoana ny amboara amin'ny lalao baolina kitra. Ho an'ny Hollandey kosa, iny lalao iny no lalao famaranana fanintelony naharesy azy, taorian'ny lalao tany Alemaina tamin'ny 1974 sy tany Arzantina tamin'ny 1978.
Eny fa na dia ny marika sasany famantarana ny firenena aza dia voamarik'iny amboara iny, araka ny nomarihan'ny mpitoraka bilaogy ao amin'ny Fulbito y fulvaso [es]:
Any Espaina, tena nankasitraka an'i Paul horita ry zareo, ilay horita nanendry ny fandresen'ny ekipa nasionaly Espaniola nanoloana ny Holandey nandritra ny lalao famaranana ny fiadiana izay ho tompondaka erantany amin'ny baolina kitra. Tena mankasitraka, satria na dia ny ambasadin'i Espaina ao Pero aza, dia ahitana zavatra mampitolagaga miseho : sainan'ny firenena Iberika namboarina, voahodidin'ilay horita manan-tanana valo.
Farany, te haneho ny heviny koa ny vehivavy. Ao amin'ny bilaogy Otras tardes [es], no ahitantsika fijery isan-karazany mikasika iny fiadiana tompon-daka eran-tany iny amin'ny akapobeny, miaraka amin'ny sary mahafinaritra:
Tsy tokony hojerena amin'ny lafin-javatra tokana fotsiny ny fiadiana tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra. Misy vehivavy sasany mankafy baolina kitra, ny sasany kosa tsy tia, ao koa ireo tsy miraharaha mihitsy io karazam-panatanjahantena io kanefa finaritra ihany mijery ireo mpilalao tsara tarehy, matanjaka sy mihanjahanja manerana ny tany. Midika izany fa samy mahazo ny anjarany daholo ny tsirairay. Jereo izay tena mahaliana kokoa.
Nifarana ny fiadiana ny tompondaka eran-tany amin'ny baolina kitra tany Afrika Atsimo tamin'ity taona 2010 ity. Tsy maintsy miandry efatra taona indray isika vao hahita ny tsy ampoizina indray mandritra ny lalao hatao any Brezila amin'ny taona 2014.